Le ndoda esihogweni | Apg29
Funda oku kwaye ubone movie-eyenziwe kakuhle ngayo ngebali kaYesu indoda esisityebi noLazaro. Eli bali akukho uthelekiso. Oku kwakusenzeka ngokwenene.
Ngoko kwenzeka ukuba umngqibi wafa, waza lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sika-Abraham. Ke indoda esisityebi nayo wafa waza wangcwatywa. Kwaye esihogweni, apho waye yentuthumbo, wawaphakamisa amehlo akhe waza wabona uAbraham kude noLazaro ecaleni kwakhe.
Kwaye kukho umntu othile osisityebi, obevatha ezibomvu nezelinen ecikizekileyo, wahlala yonke imini ukuzonwabisa kunye tofo. Kwaye kananjalo indoda elihlwempu uLazaro, ezele izilonda walala emnyango yakhe, yaye ndinqwenela ukuba anelise iphango lakhe kwiimvuthuluka eziwa etafileni yesityebi eso. Kwafika izinja, zikhothe izilonda zalo.
Waza ke wadanduluka, wathi, Bawo, Abraham, ndenzele inceba, uthume uLazaro, ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini, aphozise ulwimi lwam; ngokuba ndiyathuthunjelwa kweli langatye.